Hahaavotra ny iray amin’ny saha sisa an-tanandehiben’i Manila ve ny fiaraha-mamboly nataon’ny artista? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2019 19:21 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, عربي, Español, 繁體中文, русский, Français, English
Artista sy volantera mandray anjara amin'ny asam-pambolena. Loharano: Facebook, nahazoana alalana
Ao Filipina, misy vondrona artista sy volantera nanao tantsaha mba hamboly sombin-tany miorina ao anivon'ny faritra metropolitana ao Manila ho anisan'ny fanentanana isorohana ny fanesorana amin'ny taniny ireo mpamboly ny tany. Ity vondrona ity dia manandrateny hiarovana ny zon'ny tantsaha ao Filipina, fantatra ao an-toerana amin'ny anarana hoe SAKA, izay ao anatin'ny Fiarahan-dia amin'ny Fanajariana ny tany sy fampivoarana ny tontolo ambanivohitra marina tokoa.
Tao amin'ny antsafa niarahana tamin'ny mpanoratra, nohazavain'i Angelo Suarez mpitarika ny SAKA ny antony nanetsika ny vondrona hanomana izay antsoina hoe bungkalan, fiaraha-mamboly ny tany ao an-tanànan'i Quezon, iray amin'ny faritra 16 mandrafitra ny Metro Manila izay manakaiky ny 13 tapitrisa ny isan'ny mponina ao aminy tao amin'ny fanisam-bahoaka farany tamin'ny taona 2015.
Amin'ny maha-mpanandratenin'ny tantsaha izay mampandroso ny fambolena mitandro ny tontolo iainana anay, tianay ny handray anjara amin'ny famokaram-pambolena.
Ao anatin'ny fotokevitry ny bungkalan, nihevitra izahay fa vintana lehibe izany hanombohana mandray anjara amin'ny famokarana sy mianatra ny fambolena tsotsotra manaja ny tontolo iainana sy mandamina vondrom-piarahamonina mba hampijoroana ny olona amin'ny zony.
Ampahatsiahivin'i Suarez ny tantara mifaningotsingotra amin'ity tany manokana ity: tamin'ny voalohany izy io tanim-pambolena, norombahina tamin'ny vondrom-piarahamonin'ny tantsaha izy io tamin'ny 1930s mba ho lasa zaratanin'ny fari-piadidiana vaovao an'i Quezon City. Niova indray ny satany tamin'ny 1950s rehefa nomen'ny governemanta ho an'ny Oniversiten'i Philippines Diliman (UP), oniversitem-panjakana voalohany tao amin'ny firenena.
Tsy nampiasaina ny tany nandritra ny dimampolo taona na dia teo aza ny fivelaran'i Quezon City haingana ho tanandehibe. Tany antenantenan'ny taompolo 2000s, nahomby tamin'ny fanangonan-tsonia tany amin'ny governemanta ny vondrom-piarahamonin'ny tantsaka mba hahatonga ny tany ho eo ambany fitantanan'ny programam-panavaozana ny fizakantany saingy notsipahan'ny UP izany filazaa izany tamin'ny ‘fampifandonana’ ny fiadidiana ny tanànan'i Quezon City amin'ny fitsipahana ny fanasokajiana ny tanety ho an'ny fambolena. Eo am-pikasana hanangana ampahana parking eo amin'ny toerana ny UP.
Fa tsy nanaiky lembenana i Suarez fa tokony heverina ho fari-pambolena ny tany, araka izay nohazavainy:
Tahaka ny hafahafa ihany izany hoe misy tanim-pambolena ao amin'ny toerana be indostiria. Saingy rehefa hita ny zavamisy amin'ny tsy fisian'ny fivoarana, tokony hisy toeram-pambolena midadasika ao Quezon City izay tsy misy ifandraisana amin'ny maha-tanandehibe eo amin'ny manodidina. Ekena fa tsy toeram-pambolena io ara-taratasy—fa ny alainy dia nyfitsidihana malaky ny toerana hamaritana fa tsy misy zavatra mifandraika amin'ny toerana indostirialy ao amin'ny ampahany amin'i Quezon City io. Ny zavamisy tsy ahitana izay fanorenana ozinina mihitsy io hany ka atao tanana ny ankamaroan'ny asa atao ao amin'ny toeram-pambolena. Tsy mahazaka na dia ny mividy solika ilaina amin'ny trakitera antitra mba hampandeha azy akory aza ny tantsaha. Na dia ny mikapoka vary avy jinjaina aza dia atao tanana. Ny ataon'ny SAKA dia ny mihazona—ary ho avy amin'ny fanaporofoana—ny mahatoeram-pambolena ity tanety ity amin'ny fampamokarana azy ara-pambolena.
Nilaza i Suarez fa tany am-piandohan'ny taona 2019 no nanomboka niasa teo amin'ny faritra ny SAKA.
Nitady alalana avy amin'ny vondron'ny tantsaha tao an-toerana izahay mba hiasa tany amin'ireo metatra toradroa vitsy izay tsy nasainy noho ny fahasarotana hiasana aminy. Niasa ambolana teo amin'ny tany izahay, niasa tany mba hamokarana aubergine, okra, petsay, tsaramaso ary legioma hafa. Fa tsy maintsy namorona izahay hampahomby kokoa ny fitsinjarana ny vokatra eo amin'ireo izay niasa taminy, saingy matetika ny vokatra rehetra dia ho an'ny vondrom-piarahamonina monina aloha, avy eo ho an'ireo volanteran'ny SAKA niasa taminy.
Fa efa maro ny fanamby atrehin'ny vondrona amin'izao fotoana izao:
Ny fanamby voalohany dia noho izahay artista, tsy misy aminay mba manampahaizana amin'ny fambolena (sy fiompiana). Efa nisy fotoana indray mandeha nahazo volantera mba efa zatra amin'ny fikarakarana zaridaina an-tanandehibe sy tia fambolena ara-boajanahary izahay, fa ity tany ity mihitsy no tena ifampitolomana, niainga tamin'ny fandrangotana teo amin'ity toeram-pambolena ity mihitsy izahay.
Nahatonga fihemorana teo aminay ihany koa ny tsy fananana haizatra amin'ny fandaminana. Mpikatroka mbola zazavao ny maro aminay ao amin'ny SAKA, ary raha tarihan'ireo mpandamina ny tantsaha isa-potoana ho amin'izay izahay, ny ankamaroan-dry zareo ireo kosa mandany fotoana bebe kokoa any amin'ireo vondrom-piarahamonina misy ny tantsaha.
Nitatitra i Suarez fa efa imbetsaka ny ampahantany fambolen'ny SAKA no heniky ny ranon'orana, izany no nahatonga azy ireo nandavaka tatitra mba hanesorana ny ranon'orana mihoatra. Ity tetikasa ity no lasa laharam-pahamehana voalohany ho an-dry zareo ary mbola hitoetra izany ao anatin'ny volana vitsivitsy:
Nandavaka tatatra maromaro izahay mba hanombohana fiasana tany hafa, tokony ampy isorohana izay mety ho tondradrano hahafaty ny vokatray ireo. Nampahatsiahy anay i Ka Toto, iray amin'ireo mponina tantsaha sady mpikambana mavitrika ao amin'ny vondrona Anakpawis fa fotoana mety tsara amin'ny fambolena ny telovolana farany amin'ny taona. Ka tsy maintsy miasa mafy indroa noho ny mahazatra izahay amin'ny famoriana volantera hanatevin-daharana anay. Navitrika tamin'ny fanentanana tokoa izahay tany amin'ireo tsenankevitra isan-karazany, niresaka momba ny bungkalan ho hetsika manerana ny firenena manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tolon'ny tantsaha, sy ilay bungkalan tenany ihany koa satria maika noho ny fiavian'ny UP hanaisotra ireo tantsaha mponina.
Tsy mbola mazava aloha raha hahavaha ny fifanolanana ny lalàna nosoniavin'ny Filohan'i Filipina Rodrigo Duterte tamin'ny Aogositra 2019 mamela ny UP hivarotra ny ampahan-tany fambolena amin'ny fiadidiana ny tanànan'i Quezon City. Saingy mahavotra tokoa ny fanombohan-draharaha tahaka ny bungkalan nokarakarain'ny SAKA hanaitra ny olona ny filàna hikojakojana io tany fambolena eo afovoan'ny tanànan'i Quezon City io, sy ny ifaharana manoloana ny fandrahonana hanesorana ny mponina ao amin'ny vondrom-piarahamonina.
Eto ambany ireto ny sary bebe kokoa avy amin'ny asa bungkalan nataon'ny SAKA:
Fambolena ao an-tanàna ahitana trano avo ery ambadika. Loharano: Facebook, nahazoana alalana
Asam-pambolena nokarakarain'ny SAKA. Loharano: Facebook, nahazoana alalana
Volanteran'ny SAKA. Loharano: Facebook, nahazoana alalana